Momba anay | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd. (kaody stock: 836455), dia natsangana tamin'ny taona 1999 izay iray amin'ireo orinasam-pirenena Teknolojia avo lenta Shinoa manokana amin'ny R&D, ny famokarana ary ny marketing ny etanol tsy voamadinika miaraka amin'ireo vokatra any ambany. Izy io no mpanamboatra etanol tsy varimbazaha lehibe indrindra any Shina, ary mpanamboatra acetate lehibe indrindra any Avaratr'i Sina sy Sina Avaratra-Atsinanana. Ny vokatra dia amidy amin'ny tsena anatiny sy amin'ny firenena aziatika, eropeana miaraka amin'ny vola mitentina USD150 tapitrisa isan-taona. Izy io dia manana orinasam-bola roa an'ny orinasa iray manontolo, Tangshan Zhongrong Technology Co., Ltd ary Shanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
Mifantoka amin'ny sehatry ny indostrian'ny biokimika isika, ny akora simika fanafody, ny simika simika ary ny angovo vaovao miaraka amin'ny iraka hampiroboroboana ny fandrosoana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fanavaozana siantifika maharitra mifantoka amin'ny R&D, famokarana, marketing ny etanol tsy voamadinika ary koa ireo vokatra avy any ambony sy ambany, ary manolora tena ho mpamatsy fifaninanana etanol tsy varimbazaha.
Zhongrong Technology Corporation Ltd. dia manana ivon-toerana R&D 3 any amin'ny faritany ary nahazo zava-bita siantifika sy ara-teknolojika mihoatra ny 11 izay ambonin'ireo ambaratonga voalohany ao an-toerana, ary koa misy patanty iraisampirenena sy indostrialy miisa 42. Voninahitra lehibe ho anay ny nanaovanay ny National Torch Program sy ny National Key New Product Program. Izahay no orinasa voalohany any Sina namolavola etanol tsy voamadinika ary nahavita zava-bita ary koa patanty mifandraika amin'izany. Manana talenta fitantanana zokiny sy teknolojia avy amin'ny oniversite malaza maro izahay, ary lasa mpiorina sy mpiorina ny fenitra indostrian'ny etanol any Shina.
Zhongrong Technology dia ekipa mpanatanteraka ao amin'ny Association Alkoholan'ny China, ny talen'ny China Green Development Alliance, ary ny orinasa fampisehoana fanavaozana ara-teknolojia amin'ny indostria petrolika sy simika ao Shina. Nandritra ny taona maro, nanangona mpanjifa fiaraha-miasa maharitra izahay ary nanangana rafitra tambajotra fivarotana malalaka, izay tsy manenika ny firenena iray manontolo ihany, fa manondrana any amin'ny tsena Aziatika, Eraopeana ary Amerika Atsimo ihany koa. Ankoatry ny fampiroboroboana ny varotra amin'ny Internet nentim-paharazana, ny orinasa dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika ihany koa miaraka amina sehatra akora simika lehibe mifangaro mba hahafahan'ny vokatra entin'ny orinasa manompo mpanjifa bebe kokoa. Manantena izahay fa ny olona manana idealy ambony dia mety ho tonga mpanjifanay.
Miorina amin'ny etanol tsy varimbazaha, izahay dia mampiroborobo ny fananganana tetikasa famokarana étanol amin'ny alàlan'ny entona rambon'ny indostrialy vy, ary ny fampivelarana ny haitao etanol cellulosic, mahatsapa ny fampiharana ny indostria azo tanterahina ara-toekarena, ary ny fanamoriana hahatratra 1 tapitrisa taonina ny fahaizan'ny etanôlôzy famolavolana ao anaty 3-5 taona. Mandritra izany fotoana izany, mampiasa entona rambony izahay hitrandrahana hidrogen, fikarohana momba ny fampiharana ny angovo hidrôzenina avo lenta misy vidiny be, ary ny fananganana tohodrano angovo madio.
Ny orinasa dia mifantoka indrindra amin'ny karazana làlana teknolojia roa: ny fizotry ny simika sy ny biolojika. Anisan'izany ny famokarana fitaovana famokarana étanol 300.000 taonina isan-taona amin'ny entona vy misy ny indostrian'ny vy, vokatra isan-taona 1500 taonan'ny fitaovana fampisehoana etilôlômanina mampiasa biogas, ary 10.000 taonina fitaovana fampitaovana 1,6 hexane no teknolojia fanabeazana mahaleo tena novolavolainay tao anatin'ny dimy taona lasa.
Fahafahana mamokatra ankehitriny: 150 000 taonina Ethyl Ethanol, 300 000 taonina Ethyl Acetate, Alikaola fihinana 50 000 taonina, 15000 taonina acetate N-propyl, 10000 taonina 1,6-hexanediol, ary Enzyme 4000 taonina.